Manjaro KDE 17 ikozvino yavapo | Linux Vakapindwa muropa
Manjaro KDE 17, vhezheni nyowani yeakakurumbira rolling kuburitswa kunoenderana neArch Linux, yakaburitswa zuro. Iyo nyowani vhezheni inotora yakanakisa yeManjaro asi iine KDE desktop seyakagadzika desktop, izvo zvinoita Manjaro KDE 17 imwe yeakanakisa kunaka kweManjaro.
Iyi vhezheni itsva ye Manjaro akabhabhatidzwa saGellivara, zita remadunhurirwa rinoenderera mberi nemavara ealfabheti sekumwe kugoverwa sezvinoita Ubuntu.
Manjaro KDE 17 ine KDE Plasma 5.9.3, pamwe neKDE Zvishandiso 16.02 uye Linux kernel 4.9. Iyi kernel inongova chimwe chinhu chenguva pfupi sezvo pagara paine kutaura kwekuuya kweiyo nyowani 4.10 kune yekugovana kuti utore mukana wenyaya dzese dzinopihwa yazvino vhezheni yenyuchi kune kugovera.
Manjaro KDE 17 yakavandudza iyo yekuparadzira kernel yekuvandudza maitiro
Ichi chinhu chakanyanyo shandiswa nechikwata cheManjaro, nekuchinja kuManjaro Sisitimu yeManeja maneja yekuisa nekumisikidza iyo kernel iri nyore basa revashandisi veavice. Kuve kudaro zvinogoneka izvo mushandisi yekuvandudza kernel kwete chete kune 4.10 asiwo kune ramangwana 4.11 uye pazasi.
Pamwe naPlasma uye kernel 4.9, Manjaro KDE 17 ine Xorg-Stack vhezheni 1.19 uye zvishandiso zveManjaro zvakagadziridzwa kuitira kugadzirisa zvipembenene nekuvandudza ruzivo rwevashandisi. Mifananidzo yekugovera yakagadziridzwawo, paine dzimwe shanduko dzinosimudzira kutaridzika nekunzwa kweKDE neManjaro.
Kana iwe uine Manjaro muboka rako, iwe unongofanirwa kugadzirisa iyo kugovera kuburikidza nemidziyo yayo. Nekudaro, kana iwe uchida kuyedza iyo nyowani vhezheni, unogona kudhawunirodha Manjaro KDE 17 kubva Iyi link. Manjaro haina yakanakisa kuunganidzwa kweKDE asi kugovera kuri nyore uye kune simba kwakaita kuti vashandisi vazhinji vashandure mashandiro avo eManjaro Uye chii chaunosarudza?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Manjaro KDE 17 ikozvino yavapo
Hector Dominguez akadaro
Mubvunzo unoona sei mashandiro eLinux Mint ne KDE vs Manjaro KDE, ini ndave kuda kuisa imwe yeaya maviri kugoverwa kuyedza KDE iyo inondibata.
Pindura Hector Dominguez
Jeovani mendoza akadaro
Linux Mint KDE inorema nekuti inotanga neAcoonadi inogadziridza zvakanyanya neyakagadziriswa uye yekumisikidza maneja weLinux Mint (mintupdate uye mintupload) saka inosvika panosvika 700MB yeRam pakutanga, chinhu chakanaka ndechekuti maitiro aya vanogona "kuurawa" pasina matambudziko
Pindura Jeovani Mendoza
Linux Mint yakanaka kune vanotanga uye zvakare nevashandisi vepamberi vanofarira desktop yakashongedzerwa.Ini ndinoshandisawo akati wandei.Black Arch ine mavara mana akasiyana emagetsi pane imwechete skrini yeDDoS Attacks yakanaka.- Kwaziso MiltonLat….